Diiwaan galin ciidamada xoogga dalka ayaa ka socota degmada Balad-xaawo ee Gobolka Gedo – Radio Muqdisho
Diiwaan galin ciidamada xoogga dalka ayaa ka socota degmada Balad-xaawo ee gobolka Gedo, waxaana magaalada laga sameeyay dhowr xarun oo ciidamada lagu diiwaan galinayo.
Ciidamadaan ayaa maraya hanaanka tirakoobka casriga ah ee ay mareen dhamaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, si ay u helaan xuquuqdooda bilkasta, sidoo kale dowladu u hesho xogtooda.
Saraakiisha diiwaan galinta ciidamada ku howlan ayaa Radio Muqdisho u sheegay in maanta la diiwaan galiyay tiro ka moda ciidamada xoogga dalka ee magaaladaasi ku sugan, waxa ayna intaasi ku dareen in maalmaha soo socda ay howshaan halkaasi kasii wadi doonaan.
Dowlada Soomaaliyeed ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay oo lagu soo gaban gabeynayo tirakoobka dhamaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaluyeed, iyadoona sidoo kale dowladu ku guuleysatay in miisaaniyada dalka ee sanadkaan ay ku dartay qoondo lagu kordhinayo mushaar ciidamada.
Ciidamada Booliiska degmada Cadaado oo dayactir ku sameeyay qeybo kamida saldhiga degmadaasi"Sawirro"